နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Apple to detect Jail Break Phone?
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:01 PM
Rita August 25, 2010 at 9:48 AM
AMK August 25, 2010 at 6:16 PM
steve ကြီး ကညဏ်သိပ်များတယ် စောင့်ကြည့် ၇အုံးမယ်
Ko Boyz September 7, 2010 at 2:18 PM
ရီတာ.. သပျစ်သီး မချဉ်ပါနဲ့လေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လုံးက ဒီစကားပဲ ပြောလာတာ အိုသေတော့မယ်။ :P
AMK : ဉာဏ်များတာတော့ သေချာတယ်။ ခုလဲ အိုင်ပေါ့တ်တွေကို ဟိုဟာလေး နည်းနည်းထည့် မော်ဒယ်နံပါတ်ပြောင်း၊ ဒီဟာလေး နည်းနည်းထည့်ပြီး နောက်မော်ဒယ် အသစ်ပြောင်းနဲ့ လုပ်နေတာ...။
It's amazing. So Wonderful ဆိုပြီး launching date တုန်းက ပြောနေတာများ အမြင်ကတ်စရာ...။